Android Emulators yeiyo Yakaderera Resource uye Yakareruka PC 2021
Android Emulators yeakaderera-Resource maPC
Uri kutsvaga izvo zviri zvakanakisa Android Emulators yePC inoda zvishandiso zvishoma, isu tinokupa iwe pamusoro pevamiririri veApple yekombuta inoda zviwanikwa zvishoma. Mune ino runyorwa rwevamiririri ivo vachabhadharwa kana mahara zvinoenderana nezvinodiwa nemunhu mumwe nemumwe. Tsvaga yakaderera-zviwanikwa emulator iwe yaunogona kuisa pane yako PC.
Nguva zhinji tinoda kushandisa nharembozha yeApple asi isu hatina imwe iripo, tinongova neWindows PC. Icho chiri icho chikonzero icho isu tichakuudza iwe nezve akanakisa emulators eWindows ayo aripo nhasi.
Wakanakisa Emulators eApple
Mune ino runyorwa ticharatidza akanakisa emulators eApple anoda mashoma zviwanikwa zvekushandisa, yeuka kuti yega yeaya akasiyana zvakanyanya kubva kune mumwe nemumwe, sekugona kwatinogona kuwana akabhadharwa uye emahara emulators. Nzira yatinozozviratidza nayo haina kana chekuita neiri nani nekuti dzatichazopa kwauri ndidzo dzinonyanya kushandiswa nevashandisi veWindows nevaya vane mukurumbira wakanaka.
Kutanga isu tine iyo admin emulator LDPlayer, emulator ine yakanaka kwazvo optimization kana ichimhanya akasiyana Android kunyorera uye mitambo. Pamusoro pekugadziridzwa, zvakare zvakareruka mwenje zvakasiyana nevamwe zvinowanzove nehuremu hukuru.
Iwe unogona zvakare kushandura zviyero zvechidzitiro kune zvaunofarira uye nekuchinja huwandu hwepro processor cores uye RAM inoshandiswa neiyo emulator. Unogona kuita zvimwe zvakawanda shanduko asi izvi ndizvo zvinoita kuti zvive zvakanakisa yakaderera-inodikanwa emulators.
Iyo zvakare ine marongero anonyatso gadziridza iyo PUBG Nhare mutambo, zvisinei zvakare inoita nemimwe mitambo yemhando yacho. Battle Remake izvo zvinoda zvimwe kubva kuApple foni. LDPlayer ine Anwendung iyo inogadzirwa uye kuvandudzwa navo yaunogona kutsvaga nekutora mitambo yaunoda pane yako emulator. Asi kana iwe uchida kuve neiyo Play Store yakaiswa iwe unogona kuiisa nemaoko, iwe unogona zvakare kuisa mitambo uye kunyorera uchishandisa APK mafaera.
Hunhu uye zvinodiwa LDPlayer
Self Storage: 9GB
Rudzi rwePurosesa: Dual Core, Intel kana AMD
Weight: 250 MB
Root Kuwana: Ehe
RAM ndangariro: 2GB
Iyi emulator inoshandiswa yakanangana ne Android mitambo, pamwe neKoplayer emulator isu tinogona kuita akasiyana magadzirirwo kuti tiite zvirinani mumitambo. Asi kwete chete izvo ndizvo zvaunogona kugadzirisa, unogona zvakare kushandura huwandu hwekugadzirisa macores. Imwe bhenefiti ndeyekuti isu tinogona kushandura iyo RAM ndangariro uye iwo maficha echirongwa, zvese zvinouya nekumisikidza gadziriso asi iwe unogona kuzvishandura kune zvaunofarira kana uchida.
Koplayer inouya neiyo Play Store asi iwe unogona zvakare kuisa maapplication ane APK mafaera. Iyo emulator inogona kuona iwo maratidziro aunobatanidza kune komputa, zvisinei kana uchishandisa keyboard iwe unofanirwa kumisikidza makiyi auchazoshandisa uye iri rinogona kunge riri dambudziko rinokunetsa.
Koplayer maficha uye zvinodiwa
Self Storage: 512 MB
Weight: 300 MB
Kuenderera mberi nerondedzero ye yakaderera-zviwanikwa Android emulators Tine Nox App Player, emulator ine yakapusa uye nyore kushandisa interface. Kunyangwe iinewo mamwe marongero epamberi evashandisi vepamberi.
Pakati pedzimwe sarudzo idzo dzatinotendera kuti tigadzire kune kwedu kufarira ndidzo dzekushandisa RAM, zviyero zveiyo Android skrini uye nesimba rekugadzirisa iro ratichashandisa mune emulator. Muna Nox unogona kuisa zvinoshandiswa kubva kuGoogle Store kana kuburikidza nemafaira eAPK.
Nox App Player Zvimiro uye Zvinodiwa
Self Storage: 1.5GB
Weight: 273 MB
RAM ndangariro: 1.5GB
4. Memu Tamba
Imwe yeanonyanya kushandiswa emulators ye tamba Android mitambo paPC. Pakati pehunhu hukuru hunogadzira iyi yeanonyanya kushandiswa emulators ndiko kushandiswa kwakaderera kwezviwanikwa kana uchimhanyisa iyo emulator uye kuti iwe unogona kumhanyisa akati wandei emulators panguva imwe chete. Izvo zvakakwana kune Yemahara Moto emulator, unogona kutamba mutambo unozivikanwa weGarena.
Iyi emulator yatove neiyo Play Store inosanganisirwa, iwe unogona zvakare kuve neAndroid Midzi yekuwana pamwe nekunyora iyo emulator skrini. Kufanana nevazhinji pane urwu runyorwa iwe unogona kushandura iyo RAM uye yekugadzirisa simba iwe yaunoda iyo Android PC emulator yekushandisa.
Memu Play maficha uye zvinodiwa
Weight: 600 MB
Operating system: Android 4.4, 5.1 uye 7.1.1
Dhawunirodha Memu Play
Bluestacks iri nyore kwazvo kushandisa emulator nekuda kwayo yakapusa interface uye yayo yakapusa dhizaini iyo inoshanda kwatiri kuti titambe mitambo kana kushandisa zvinoshandiswa. Pakati pezvakawanda mapoinzi inotsigira emulator iyi ndeyekuti inowirirana neinenge yese mitambo uye kunyorera kweiyo Android inoshanda sisitimu, iyo Play Store yatouya nekusavapo.
Izvi zvakare zvine Root kupinda, inowirirana neakawanda-anobata uye mbeva uye kubatanidza keyboard, zvakare ine yemuno Windows graphic rutsigiro, sensors uye kamera zvakabatanidzwa kuva neakanakisa kwazvo Android ruzivo. Kunze kwekuve wakanaka Android emulator yeakaderera-zviwanikwa maPC, zviri mahara.
Bluestacks 4.0 Zvimiro uye Zvinodiwa
Self Storage: 2GB
Weight: 375 MB
Mutengo: Yemahara uye Inobhadharwa
Emulator iyo yakagadzirirwa iyo tamba nharembozha pamakomputa, MutamboLoop Yakave huru sarudzo kune avo vanoda nharembozha. Iyo kambani inotarisira kuvandudzwa kwayo inyanzvi mukusimudzira mutambo wevhidhiyo, saka emulator yakagadziridzwa kutamba mitambo yemavhidhiyo paPC.
Kuti umhanye iyo emulator inofanirwa kuve neinosvika 2 GB ye RAM, kuve ne2 GB yekuchengetedza iripo mukati mekombuta. Nekudaro neiyi emulator iwe unogona chete kutamba mitambo yemavhidhiyo, kana iwe uchitsvaga emulator yekutamba GameLoop isarudzo yakanaka.
GameLopp maficha uye zvinodiwa
Iwo ndiwo akanakisa emulators eApp yakaderera-zviwanikwa maPC, yeuka kuti chinyorwa chinozovandudzwa kana ruzivo rwacho rwanyanya kurembera kuitira kuti tigare tichikuchengeta uchigadziriswa, vamwe emulators vanogona kusiya runyorwa uye vamwe vanogona kupinda.
Emulator, Android emulators
Gonzalo arreola muna Chikunguru 31, 2020
Ini ndinogona kuisa iyo Memu Play emulator pane Windows 7 kana 8.1?
Laura muna Nyamavhuvhu 15, 2020
Hongu, zvinokwanisika kuisa MEMU Play mukati Windows 7 kana 8.1
Diego Mendez muna Nyamavhuvhu 15, 2020
Ndinogona kutamba PUBG Nhare pane iyo Memu Play emulator?
Pedro muna Nyamavhuvhu 15, 2020
Zvinoenderana nesimba rePC yako, asi kana iwe uchikwanisa kutamba pane ino emulator.
Rosalba Hernandez muna Nyamavhuvhu 23, 2020
Ndeapi mitambo anotsigira emulators?
Mariano gonzalez munaGunyana 6, 2020
Ko Koplayer inogona kuiswa paWindows 10?
Ivo vanotsigira mizhinji yemitambo ine Android, senge PUBG Nhare, Mahara Moto, Kufona kweDuty, pakati pevamwe.
Pablo musi wa8 Mbudzi 2020
iwe unogona kutamba wakasununguka moto neiyi emulator?
Admin musi wa8 Mbudzi 2020
Ehe, iwe unogona kumhanyisa Yemahara Moto mutambo neaya emulators. Iko kutsetseka kunoenderana nePC yako.
Chii chaunogona kubhadhara neWechat Kubhadhara muChina
WhatsApp Uyezve 2021